စတော်ဘယ်ရီကိတ်မုန့်🍓 Out ရေထဲကငါး-၁ နာရီစုစည်း🍓 Berry Bitty Adventures
တရား ၀ င်စတော်ဘယ်ရီ Shortcake ရုပ်သံလိုင်းမှ►►ဗီဒီယိုအသစ်များအတွက်အပတ်စဉ်စာရင်းသွင်းပါ။ https://goo.gl/CeNgH0
► Berry Bitty ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကလစ်များကိုကြည့်ပါ။ http: //www.youtube.com/playlist? list ...
► Box အတွင်းမှထွက်ရှိသော Exclusive Stop Motion စီးရီး! http://bit.ly/2s0110q
► Berry Bitty City မှအသစ်။ http://bit.ly/2rrahfn
►စတော်ဘယ်ရီ Shortcake အပြည့်အဝဇာတ်လမ်းတွဲ http://bit.ly/2rgYtbj
http://www.strawberryshortcake.com/ အွန်လိုင်းရှိ Strawberry ကိုကြည့်ရှုပါ။
Berry ပျော်စရာမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများ Berry! http://appstore.com/strawberryshortcake
http://amzn.to/1WSa0WM နှင့်ဒီဂျစ်တယ် HD မိတ္တူများမှစတော်ဘယ်ရီဒီဗီဒီများကို ၀ ယ်ပါ။ http://apple.co/1OEPWIl
Netflix အပေါ်အပြည့်အဝဖြစ်စဉ်များ! http://bit.ly/berrybitty
Facebook ရှိသူငယ်ချင်း Strawberry! http: //www.facebook.com/StrawberrySho ...
Strawberry Shortcake နှင့်သူ၏သူငယ်ချင်းများအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါသလား။
Strawberry Shortcake သည် Berry Bitty Caféဆိုင်တွင်စားဖိုမှူးနှင့်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။ သူမ၌အနီရောင်ဆံပင်ရှိပြီးစတော်ဘယ်ရီ ဦး ထုပ်တစ်ထည်ရှိပြီးပန်းရောင်ပန်းပွင့်ညှပ်ပါရှိသည်။ အစိမ်းရောင်မျက်လုံးများသည်၊ အဖြူရောင်တီရှပ်တစ်ထည်ကိုအစိမ်းရောင်နှင့်အဖြူရောင်အစင်းပါခြေထောက်များနှင့်အနီရောင်ဂျင်းနင်းများပါသောပန်းရောင် Polka dot စားဆင်ယင်ပေါ်တွင် ၀ တ်ဆင်ထားသည်။ သူမ၏အိုင်ကွန်သည်စတော်ဘယ်ရီဖြစ်သည်။ သူမသည်ယုံကြည်မှု၊ ထောက်ထားစာနာမှု၊ အကောင်းမြင်မှု၊ သူမ၏အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များမှာ Custard the kitten နှင့် Pupcake the puppy ။
Orange Blossom သည်စတိုးဆိုင်မန်နေဂျာနှင့် Orange Mart ၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။ သူမသည်အနက်ရောင် - အညိုရောင်ဆံပင်၊ အညိုရောင်မျက်လုံးများရှိပြီးလိမ္မော်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်အစင်းပါခြေစွပ်အင်္ကျီများ၊ လိမ္မော်ရောင်ဘွတ်ဖိနပ်များနှင့်ဆံပင်၏အလယ်ဗဟိုတွင်လိမ္မော်ရောင်ရှိ camille ပန်းပွင့်ကလစ်ရှိသည်။ သူမ၏အိုင်ကွန်သည်လိမ္မော်ရောင်ဖြစ်သည်။ သူမသည်လိမ္မာပါးနပ်သော၊ လုံ့လရှိသူ၊ တီထွင်ဆန်းသစ်သော၊ အားကစား၊ စွန့်စားခန်း၊ ဂရုစိုက်တတ်သူဖြစ်ပြီးအမြဲကူညီရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ သူမ၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည်ခွေးကလေး Marmalade ဖြစ်သည်။
Lemon Meringue သည်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူဖြစ်ပြီး Lemon Beauty အလှပြင်ဆိုင်၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။ သူမတွင်အဝါရောင်ဆံပင်၊ ကောင်းကင်ပြာရောင်မျက်လုံးများရှိပြီးအဝါရောင်ဆွယ်တာအင်္ကျီ၊ အဝါရောင်နှင့်အဖြူရောင်အစင်းပါသောခြေစွပ်ပါသောအပြာရောင်စကတ်၊ အဝါရောင် Mary Jane နှင့်သူမ၏ဆံပင်ပေါ်ရှိသံပုရာညှပ်များရှိသည်။ သူမ၏အိုင်ကွန်သည်သံပုရာဖြစ်သည်။ သူမသည်ဖန်တီးမှု၊ စတိုင်ကျမှု၊ မိန်းကလေးဖြစ်ပြီးဆံပင်မကောင်းသောဆံပင်နေ့ကဲ့သို့သောမည်သည့်ဆံပင်ပြproblemနာကိုမဆိုဖြေရှင်းနိုင်သည့်လျင်မြန်သောတွေးခေါ်ရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူမ၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည်ခွေးကလေး Henna ဖြစ်သည်။
Blueberry Muffin သည်စာအုပ်ဆိုင်နှင့် Blueberry Bookstore ၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။ သူမမှာနက်ပြာရောင်ဆံပင်အပြာရောင်မျက်လုံးတွေရှိပြီးအပြာရောင်ကဒ်နီယာကိုနက်ပြာရောင်အစက်တွေပါတဲ့အပြာရောင်ရှပ်အင်္ကျီတစ်ထည်၊ မြ - အစိမ်းနဲ့အဖြူစင်းရောင်ခြေစွပ်ပါသောအပြာရောင်စကတ်တို့၊ သူမ၏ဆံပင်။ သူမ၏အိုင်ကွန်သည်ဘလူးဘယ်ရီဖြစ်သည်။ သူမသည်မတ်တတ်၊ အသိဉာဏ်ရှိပြီးလုံ့လဝီရိယရှိပြီးပြaနာကို ဦး စွာစဉ်းစားသည်။ သူမ၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မှာ Scouty the ခွေးကလေးဖြစ်သည်။
Raspberry Torte သည် Raspberry Boutique ၏ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာနှင့်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။ သူမ၌အနီရောင် - ပန်းရောင်ဆံပင်၊ ခရမ်းရောင်မျက်လုံးများရှိပြီးပန်းရောင်နှင့်အဖြူရောင်အစင်းပါသောအစိမ်းရောင်လက်ရှည်များပါသည့်နက်ရှိုင်းသောပန်းရောင်ဂါ ၀ န်အပေါ်ခရမ်းရောင်အကျီတိုတို၊ ခရမ်းရောင်လက်ကောက်၊ နှင့်သူမ၏ဆံပင်ပေါ်မှာ Raspberry နှင့်အတူတစ် ဦး ခေါင်းကို။ သူမ၏အိုင်ကွန်သည် Raspberry ဖြစ်သည်။ သူမသည်ဖက်ရှင်၊ ဖော်ရွေမှု၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သူမ၏ဖက်ရှင်များကိုသူငယ်ချင်းများကဲ့သို့ဂရုစိုက်သည်။ သူမ၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မှာ Chiffon ဖြစ်သည်။
Plum Pudding သည် Plum Dance စတူဒီယို၏ dancer နှင့်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။ သူမ၌ခရမ်းရောင် - ခရမ်းရောင်ဆံပင်များရှိပြီးဇီးသီးညှပ်ပါ ၀ င်ပြီးအပြာကလစ်များဖြင့်ဝတ်ဆင်ထားသည်၊ နက်သောခရမ်းရောင်မျက်လုံးများ၊ ခရမ်းရောင်ရင့်ရောင်နှင့်အပြာနုရောင်အ ၀ တ်အစား၊ အစိမ်းနှင့်အဖြူရောင်အစင်းပါသောခြေစွပ်အင်္ကျီများ (တီဗွီရှိုးတွင်၊ ခရမ်းရောင်ဘဲလေးဖိနပ်နှင့်ခရမ်းရောင်ဘဲလေးဖိနပ်။ သူမ၏အိုင်ကွန်သည်ဇီးသီးဖြစ်သည်။ သူမသည်တက်ကြွ။ ချစ်ဖွယ်ကောင်းပြီးထူးကဲသော၊ ရယ်စရာကောင်းသော၊ သူမ၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မှာ Pitterpatch ဖြစ်သည်။
#StrawberryShortcake #WildBrain #VideoForKids
စတော်ဘယ်ရီကိတ်မုန့်🍓🍓မနက်ဖြန်ဆံပင်သွားပြီ🍓 ၁ နာရီစုစည်း🍓 Berry Bitty Adventures
စတော်ဘယ်ရီကိတ်မုန့် esRescuing စတော်ဘယ်ရီ🍓 Berry Bitty Adventures ကို
သင်သေပြီးနောက်သင့်ခန္ဓာကိုယ်မည်သို့ဖြစ်သွားသနည်း။ | လူ့ဇီဝဗေဒ ဒေါက်တာ Binocs Show | Peekaboo Kidz
Polly အိတ်ဆောင် | အပြည့်အဝအပိုင်းစုစည်း | ၁ နာရီ | ကလေးများအတွက်ဗွီဒီယိုများ
စတော်ဘယ်ရီကိတ်မုန့် the Berry Breeze လေတိုက်ရာနေရာ🍓 Berry Bitty Adventures The Berry Big Help
Polly Pocket ဇာတ်လမ်းတွဲများ အရူးလူမျိုး! omp စုစည်းခြင်း ကလေးများအတွက်ရုပ်ရှင် Girls ရုပ်ရှင်ကား
Winx ကလပ် - ရာသီ (၆) အပိုင်းအပြည့် [13-14-15]
စတော်ဘယ်ရီ Shortcake - Starlight, Star တောက်ပ / အလေ့အကျင့်ပြီးပြည့်စုံစေသည်
စတော်ဘယ်ရီ Shortcake 🍓 Starlight, Star Bright Berry Bitty စွန့်စားမှုများ
စတော်ဘယ်ရီ Shortcake - ထိပ်မှာ Berry ဟာ Big ရိတ်သိမ်း / အခန်း - စုစည်း
မိနစ် ၃၀ အတွက် Bow-Toons Adventures! | စုစည်းခြင်းအပိုင်း ၂ | Minnie ရဲ့လေး -ons | Disney Junior
စတော်ဘယ်ရီစားပွဲ🍓 Berry Big Harvest Har ၁ နာရီစုစည်း comp Berry Bitty Adventures
Strawberry Shortcake ake အဆင့်မြင့်နည်းပညာပြဇာတ်🍓 Berry Bitty Adventures The Berry Big Help
စတော်ဘယ်ရီကိတ်မုန့် - ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလူးဘယ်ရီဘယ်ကိုသွားပြီလဲ၊ / အမူအကျင့် Meltdown - စုစည်း
စတော်ဘယ်ရီကိတ်မုန့် BigThe Freeze 🍓 Berry ဟာ Bitty Adventures ကို
စတော်ဘယ်ရီ Shortcake - သင် Bee / House ပိုးမွှားများ - သင်စုစည်းနိုင်သောအကောင်းဆုံး Berry အကောင်းဆုံး
အပိုင်း 1 မုန့်ဖုတ်ပေးနိုင်ပါတယ် - လုပ်ပါ! ဖုတ်ပါ ပေါင်မုန့် - အပြည့်အဝအပိုင်းစုစည်း